Global Voices teny Malagasy » Nisara-bazana tamin’ny fanitarana ny fe-potoana iasana napetrak’i Beijing ny mpanao lalàna mpanohana ny demokrasia any Hong Kong · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Aogositra 2020 13:19 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Mpanao lalàna mpanohana ny demaokrasia nivory tao amin'ny antenimiera LegCo. Sary avy amin'ny inmediahk (CC: AT-NC)
Nandrehitra ny fanoherana i Carrie Lam, Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong, ny 21 Aogositra taorian'ny nanambarany ny fahameham-pahefana  hanemorana ny fifidianana ny Filankevitry ny Mpanao Lalàna (LegCo) amin'ny volana Septambra 2021, nolazainy ny olana momba ny COVID-19.
Tokony hifidy LegCo vaovao amin'ny 5 Septambra i Hong Kong. Nitranga ny ampitson'ny fanesorana ny kandida  miisa 12 mpanohana ny demaokrasia tsy handray anjara amin'ny fifidianana ny fanapahan-kevitr'i Lam, izay niteraka resabe tamin'ny volana Jolay sy ny fitomboan'ny fitsabahan'i Beijing amin'ny fitantanana ny tanàndehibe.
Ny elanelana herintaona amin'ny fiafaran'ny fe-potoana iasan'ny LegCo farany ankehitriny sy ny fifidianana amin'ny taona manaraka ny lafiny iray nampiady hevitra momba ity fanemorana ity. Mba hamahana izany dia nangataka ny Kongresy Nasionalim-bahoaka (NPC) ny Lehiben'ny Mpanatanteraka mba haneho ny heviny. Nanapa-kevitra ity farany ny mba hanavaozana indray ny fe-potoana iasan'ireo mpanao lalàna rehetra ao anatin'ny “herintaona” farafahakeliny.
Nametraka ireo mpanao lalàna mpanohana ny demaokrasia manoloana ny sabatra roa lela ny fidirana an-tsehatra nataon'ny NPC, na dia fombafomba ara-teoria fotsiny aza.
Hita toy ny mitolo-batana manoloana ny tanibe ny fanekena ny fanitarana nomen'ny NPC ao Beijing. Etsy andaniny, midika fanaovana ankivy ny LegCo ny fandavana ka manome alalana ny mpanao lalàna mpanohana an'i Beijing hanjakazaka malalaka amin'ny fampandaniana lalàna.
Nampisy tsy fitovian-kevitra goavana teo amin'ny mpanohana ny demaokrasia ny safidy sarotra; ka tsy azo ihodivirana ankehitriny ny fisaraham-bazana.
Mikasa ny hanao ankivy ireo antoko mpandala ny ao an-toerana izay zanaka antoko ifotony radikaly kokoa mpanohana ny demaokrasia. Nanazava ny mpanao lalàna Ray Chan, tao amin'ny tohivakan-tsioka hoe maninona izy no manohitra ny fanendrena nataon'ny NPC:
Mandà ny fanendrena nataon'ny Kongresy Nasionalim-bahoaka ho amin'ny fe-potoana iasana miampy herintaona aho. Tsy niala tao amin'ny #LegCo aho. Manao ankivy ny teny hoe fanitarana aho. Tsotra ny anton'ny fanapahan-kevitro. Voalohany, tapitra amin'ny 2020 ny fe-potoana iasanay. Raha tsy misy ny fe-potoana iasana vaovao dia tsy ara-dalàna ny fe-potoana iasanay. […] Faharoa, midika ny fanekena ny fanendrena fa manaiky ny fahefan'ny tsy fahombiazan'ny Governemanta Carrie Lam sy ny leviathana na ny Kongresy Nasionalim-bahoaka amin'ny fanovana tsy ara-drariny ireo mpikambana ao amin'ny LegCo. Hanokatra ny sakana amin'ny karazana fitsabahana rehetra mandritra ny taona hoavy maro izany.
Niverina tamin'ny fanapahan-keviny avy eo i Chan ary nilaza fa handray fanapahan-kevitra izy raha vao nandre ny feon'ny vahoaka.
Etsy ankilany, nanapan-kevitra ny hijanona ao amin'ny LegCo ny antoko Demokratika sy ny antoko Sivily, zanaka antoko mpanohana ny demaokrasia mpandala ny mahazatra kokoa izay manana mpikambana betsaka indrindra ao aminy avy amina vondrona matihanina. Nanazava  ny heviny tao amin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny sehatra famoaham-baovao an-tserasera ao an-toerana ny filohan'ny Antoko Demokratika teo aloha, Albert Ho:
Tokony hiaro ny zon'ny olom-pirenena amin'ny lafiny rehetra isika, hiaro ny soatoavintsika ary hanohitra ny fanovana… Moa ve isika hilefitra manoloana ny fahafahantsika mampiaka-peo amin'ny faoherana ? Raha te-handany lalàna manararao-pahefana izy ireo na handany ny volan'ny mpandoa hetra dia tsy maintsy manameloka ilay fanapahan-kevitra ao amin'ny LegCo ny olona.
Nifandrafy tamin'ny lohahevitra maromaro nampiady hevitra tato anatin'ny volana vitsivitsy ny mpanohana ny mpitondra sy ny mpanohana an'i Beijing. Anisan'izany ireo fanovana ifotony  amin'ny asan'ny filankevitry ny distrika izay mamela ny Hongkongers  ao amin'i Shina tanibe hifidy, ny fampiharana ny rafi-pahasalamana misy kaody miloko  ao an-tanàndehibe, ary ny fanavaozana ny lalàmpanorenana izay hanova  ny fitsipiky ny fifidianana ny Lehiben'ny Mpanatanteraka manomboka. amin'ny 2022.
Raha ahilika ao amin'ny LegCo ny antoko mpanohana ny demaokrasia dia inoana marimarina fa ho lany ireo volavolan-dalàna, izay heverin'ny mpiaro ny demokrasia ho didy jadona.
Raha naneho hevitra  ny mpahay siansa ara-politika fa hitarika amin'ny fanilikilihana ny mpanohitra sy ny fanamafisana ny fahefana didy jadona ny fanaovana ankivy ny LegCo dia, ireo mpandala ny ao an-toerana kosa miaro izany amin'ny antony ara-moraly – manizingizina izy ireo fa tsy tokony hanatevin-daharana ny LegCo ny mpanao lalàna raha tsy misy fahefana avy amin'ny vahoaka.
Nanampy  ny mpandala ny ao an-toerana sasany fa amin'ny fanesorana faobe  ireo kandida mpanohana ny demaokrasia mahavelom-panantenana mandritra ny vanim-potoana fanendrena dia tokony hamela tanteraka ny politikam-panjakana ny mpanohitra.
Mazava ho azy fa niely tamin'ny tambajotra sosialy ny adihevitra, niaraka tamin'ny adihevitra indraindray nivadika ho fahatezerana satria nisy mpisera sasany nilaza fa “mpamadika maty eritreritra ” ireo mpanao lalàna mpanohana ny demaokrasia izay mankato ny fanendrena nataon'ny NPC.
Tamin'ny fanoherana izany toe-draharaha izany no nangatahan'ny  mpanao lalàna mpandala ny ao an-toerana Chu Hoidick ny fangalana ny hevitry ny besinimaro na ny fanaovana ny fitsapan-kevi-bahoaka.
Raha nihaino ireo fangatahana ireo ny Antoko Demokratika dia nanamafy ny hisian'ny fanapahan-kevitra voahadihady sy siantifika kokoa izy ireo:
Na hijanona na hanao ankivy ny fifidianana antenimiera ireo mpanao lalàna ankehitriny amin'ny taona hoavy dia hametraka ny fanapahan-keviny amin'ny fitsapan-kevitra siantifika ny Antoko Demokratika. Manantena izahay fa hisy adihevitra farafaharatsiny eo amin'ny andaniny roa mba hahafahan'ny vahoaka HK mamantatra ny zavatra hosafidiany mialoha ny hanaovana ny fifidianana.
Mandritra izany fotoana izany, maro ny miahiahy  fa hanimba tanteraka ny herin'ny mpanohitra ao an-tanàndehibe ny fisaraham-bazana eo amin'ny mpandala ny ao an-toerana sy ny démokraty, amin'ny fampihenana ny fahafahan'ny mpanohitra any Hong Kong – na inona na inona fanapahan-kevitra farany ho raisin'ny mpanao politika momba ny hoe hijanona sa hanao ankivy ny fanalavana ny fe-potoana iasan'ny LegCo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/08/31/149453/
 nanambarany ny fahameham-pahefana: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3095461/hong-kong-legislative-council-elections-be-postponed
 fanesorana ny kandida: https://globalvoices.org/2020/07/31/hong-kong-government-disqualifies-12-pro-democracy-candidates-running-for-the-local-legislature/
 fanovana ifotony: https://news.mingpao.com/pns/%E8%A7%80%E9%BB%9E/article/20200812/s00012/1597171147832/%E5%BC%B5%E7%82%B3%E8%89%AF-%E5%9C%A8%E6%AD%BB%E5%B1%80%E5%92%8C%E8%99%9B%E5%B1%80%E4%B9%8B%E9%96%93-%E5%B0%8B%E6%B1%82%E6%94%BF%E6%B2%BB%E9%87%8D%E5%BB%BA%E7%9A%84%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%A2%9D%E8%B7%AF
 rafi-pahasalamana misy kaody miloko: https://globalvoices.org/2020/08/18/will-chinas-color-coded-covid-19-tracking-system-come-to-hong-kong/
 naneho hevitra: https://www.hkcnews.com/article/32960/%E7%AB%8B%E6%B3%95%E6%9C%83%E5%BB%B6%E4%BB%BB-%E8%91%89%E5%81%A5%E6%B0%91-%E8%94%A1%E5%AD%90%E5%BC%B7-32995/%E3%80%90%E5%BB%B6%E4%BB%BBvs%E7%B8%BD%E8%BE%AD%E3%80%91%E5%A4%9A%E5%90%8D%E5%AD%B8%E8%80%85%E8%AA%8D%E7%82%BA%E6%B0%91%E4%B8%BB%E6%B4%BE%E6%87%89%E7%95%99%E4%BB%BB-%E8%91%89%E5%81%A5%E6%B0%91%EF%BC%9A%E7%B8%BD%E8%BE%AD%E5%A5%AA%E8%B5%B0%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E5%83%85%E6%9C%89%E6%94%BF%E6%B2%BB%E6%AC%8A%E5%88%A9
 mpamadika maty eritreritra: https://twitter.com/dng88/status/1296291096591572994